China i-RTV Potting sealant 5299W-S abavelisi kunye nabathengisi IsiHuiti
Isitywina seRTV Potting 5299W-S
I-5299W-S yimodyuli ye-PV ye-RTV etywinelwe ngokukodwa ukusetyenziselwa ibhokisi yokubumbana kunye nezinto zombane neze-elektroniki ezifunekayo kushuselo lwamanzi kunye nokuqhutywa kobushushu. Umxube weStatic kunye nomxube wokuxuba ngu-5: 1 ngokobunzima.
* Uncedo lweMveliso:
1) Amacandelo amabini, Mhlophe / mnyama (Icandelo kuphela).
2) iipropathi ezizinzileyo, ukumelana nokufuma, ukunyanga ngokukhawuleza.
3) Iipropati zombane ezigqwesileyo kunye nokuqhuba kakuhle kwe-thermal.
4) Ukubambelela kakuhle kuninzi lweplastiki, irabha, iPC, iPA, iPOO kunye nezinye izinto.
5) Kuvunyelwe i-UL 94-0 (jonga ku-E248611), i-SGS, i-TUV kunye ne-RoSH.
6) I-UL 94-0 evunyiweyo (jonga ku-E248611), i-SGS, i-TUV kunye ne-RoSH.
Icandelo: 10kg / pail
Icandelo B: 2kg / can
Inkxaso yentengiso yabasasazi behlabathi liphela. sibonelela ngezinto zentengiso, inkxaso yomboniso.
I-TUV, UL, SGS, ROSH, FIKELELA, ISO9001: 2015
Imodyuli ye-HT906Z PV RTV itywina